Juan Tranche. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Spiculus | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: Juan Tranche. Nkọwa Twitter.
John Tranch Anọ m na ngalaba na-ebipụta akwụkwọ ruo oge ụfọdụ, na-enwe otu mmasị ma na-elekwasị anya na ọmụmụ nke Rome oge ochie na ụwa oge gboo. Ugbu a, mgbe o jiri ngwa ngwa gbagoo n'ahịa ahụ nke na-akọ akụkọ banyere onye na-alụ ọgụ ọgụ akụkọ, Ogwu. Enwere m ekele maka oge gị, nraranye na obiọma maka nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-ekwu maka ya na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ.
Juan Tranche - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Ogwu bụ akwụkwọ mbụ gị na akụkọ ihe mere eme. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche ahụ siri?
Ruo ọtụtụ afọ Enwere m mmetụta na-enweghị nkọwa maka ụwa gladiator na Spiculus bụ otu n'ime ihe kacha mma nke oge niile. Ọ na-adọta uche m mgbe niile ka onye ọ bụla nụla banyere ndị agha a hapụrụ ndụ ha n'ọgbọ egwuregwu, mana ọ nweghị onye maara onye dị adị n'ezie. Spartacus, nke a kasị mara amara n’oge nile, o mere ya maka iduzi nnupụisi ohu, ọ bụghị maka ịbụ ezigbo onye na-alụ ọgụ ọnwụ. N’obodo ebe anyi n’acho itule ihe ịga nke oma site n’inye ihe onyinye na ihe icho mma nke ihe niile, ma o pekariri m achoputara ya. Eji m uru obere data na anyị nwere banyere ya na agụụ na-agụ m oge ahụ ịkọ, ọ bụghị naanị akụkọ ya, kamakwa iwebata ụwa a magburu onwe ya site n'aka ndị enyi abụọ na-eche ihu na Rome nke Emperor Nero.
Akwụkwọ mbụ m chetara n’ụlọ akwụkwọ bụ akụkọ ihe mere eme nke Pompeii gwara umuaka ebe ana akpo protagonist Sofia. Akwụkwọ ahụ akara m n'ihi na anyị na onye dere akwụkwọ nwere nzukọ. E wezụga ibu ọrụ nke ịgụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ, akwụkwọ mbụ m gụrụ n'onwe m bụ Ogidi nke ụwa. M hụrụ n'anya. Kemgbe ahụ akwụsịbeghị m ịgụ akwụkwọ ma ana m agbasi ụmụ m nwanyị obi m.
Banyere ide ihe. Naanị ihe m dere na ndụ m niile, ruo mgbe m kpebiri ịkọ akụkọ banyere Spiculus, bụ akwụkwọ ozi ịhụnanya na afọ iri na ise onye taa bụ nwunye m. Ọ dịbeghị mgbe m dere akụkọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, mana enwere m olileanya na agaghị m ahapụ ihe omume ntụrụndụ a nke bụrụla agụụ.
M ga-anọnyere Ken follet n’ihi na akwụkwọ ya mere ka m hụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme n’anya. Ọzọkwa Santiago Posteguillo na ụdị a na, n'ezie, Juan Eslava Galan, ebe ọ bụ na m na-asọpụrụ ụwa ndị Rom n'ihi akwụkwọ ya. N'ebe ndị ọzọ m na-anụ ọkụ n'obi, dị ka akụkọ ntụrụndụ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ mpụ, enwere m mmasị na ha Santiago Díaz na Carmen Mola.
Sila, onye isi akwukwo nke akwukwo Ndị GladiatorsNke Roger Mouge. M ka na-eche etu agwa a ga-esi chee n ’ọnọdụ dị iche iche ma ọ bụ otu ọ ga - esi mee ihe dị iche. Eeh, ama m na nke a dịtụ ịtụnanya. Ọ ga-amasị m ịmepụta, ọ bụghị nke ukwuu ịmara, Alice gould onye protagonist nke Ahịrị gbagọrọ agbagọ nke Chinekenke Torcuato Luca de Tena dere.
Na ederede ederede, egwu nke uda olu dị ka Max Ritcher, Hans Zimmer na mgbe niile dịka ọnọdụ m na-emepe. Ọzọkwa, ọ nweghị mgbe ọ ga-efu kọfị na chocolate. Maka ịgụ ihe, ọ dịghị. Enwere m ikike dị nnọọ elu ịta na agbanyeghị ka nnukwu mkpọtụ dị n’akụkụ m ma-ọbụ n’etu ụmụ m nwanyị siri ike, telivishọn m na-abanye n’ebe ahụ mgbe m na-agụ ihe.
Iji dee, dika m kwuru, n'abalị na n’elu tebụl n’ime ime ụlọ ahụ. Readgụ ihe Enwere m oche oche dị n'ime ụlọ nwa m nwanyị, sofa n'ime ime ụlọ, ime ụlọ, kichin, teres. Na nchịkọta, ọnaghị emetụta m saịtị ahụ n'ihi na m nwere mmasị n'ịgụ ihe. Mana, ọ bụrụ na m ga-anọrọ oge ọ bụla m ga-ahọrọ okpomọkụ, na hammock na ụda nke oké osimiri na ndabere.
Agụrụ m ihe niile. Ahụrụ m akwụkwọ akụkọ n'anya akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ ọgụgụ oji m jikọtara ya imeghari. Echere m na naanị ụdị nke m agụtụbeghị bụ akwụkwọ akụkọ ịhụnanya, mana anaghị m achịkwa ya.
Ugbu a, m gwụchara: Enweghị ọhịa ọzọ ịlaghachi, nke Carlos Augusto Casas dere, nke m masịrị ya. Amalitere m ịgụ: Alanonke Jose Zoilo Hernández dere.
Ide, m na-emecha akwụkwọ m nke abụọ gịnị banyere womenmụ nwanyị gladiator.
Taa enwerekwa ọkọnọ karịa mgbe ọ bụla ma, ọ dabara nke ọma, enwere ike ịzụta akwụkwọ n'ụdị ọ bụla. Nke a bụ nnukwu akụkọ maka na ọ na-enye ohere ka omenaala dịrị maka mmefu ego niile na maka ụtọ niile. E nwekwara ohere ndị na-adịbughị na-ekele ya ibipụta onwe nke ahụ kwere ka ndị edemede novice, bụ ndị buru ụzọ chee na ọ gaghị ekwe omume imezu nrọ ha, ohere nke idezi ọrụ ha. Agbalịrị m n'ihi na enweghị m ihe ọ bụla ga-efunahụ na ihe ọ bụla m ga - enweta na, na - enweghị obi abụọ ọ bụla, emere m mkpebi ziri ezi kemgbe, ebe m dere OgwuỌ dị ịtụnanya na o mere m ọgaranya.
Eziokwu bụ na Amaghị m. Ogwu Ọ bịara dị naanị ọnwa ole na ole gara aga, ya mere, ama m oge a. Yabụ ihe niile m na-aga dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ihe na-abịa ka mma, a na m atụ anya ibi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Juan Tranche. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Spiculus
Ken Follet: akwụkwọ